သတင်းမီဒီယာသမားတွေ တည်ဆဲဥပဒေတွေကို လိုက်နာဖို့ လိုအပ်
"ဥပဒေကရှိတယ်လေ၊ဥပဒေတစ်ခု တည်ရှိနေသရွေ့ သူ့ကိုလိုက်နာရမှာပဲလေ၊ နိုင်ငံသားတိုင်းဟာ လူတိုင်းဟာ ဥပဒေကို လိုက်နာရတယ်၊ ကျနော်တို့ဟာ ခြွင်းချက်မဟုတ်ဘူး၊ အဲတော့ ဥပဒေတစ်ခုဟာ မဖျက်သိမ်းရသေး သရွေ့ကတော့ ကျနော်တို့က သတိထားပြီး ဆောင်ရွက်ရမှာပဲ၊ ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်ရမယ် တည်ဆဲ ဥပဒေကိုလည်းသိရမယ်၊ အဲဒီနှစ်ခုကြားမှာ ကျနော်တို့လည်း အဲလိုပဲရှင်သန်ခဲ့ရပါတယ်၊ နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကျော် ကြာ အဲလို ရှင်သန်ခဲ့ရပါတယ်၊ ဥပေဒကို ပြုပြင်တာသုံးသပ်တာက တကဏ္ဍပဲ၊ ဒါပေမဲ့ ဥပဒေကို လိုက်နာမှု အပိုင်းကတော့ ဘယ်သူမှ ပေါ့ဆလို့မရပါဘူး၊ အဲတော့ ကျနော်တို့ မီဒီယာသင်တန်းတွေမှာ သင်တာတွေ့ ရပါတယ်။ ဘယ်လောက်အန္တရာယ်ရှိလဲ၊ ရမယ့်ဟာနဲ့ ပေးဆပ်ရမယ့်ဟာနဲ့ ဥပဒေဘာထားလဲ ထိန်းချုပ်မှုက ဘာရှိလဲ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်က ဘာရှိလဲ၊ အဲဒီကြားမှာပဲ ကိုယ်က ရှင်သန်အောင်လုပ်ရတာပဲလေ၊ ဒါကြောင့် သတိထားပြီးတော့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သွားကြဖို့ပဲ အကြံပေးချင်ပါတယ်"
All the current rules and regulations in Myanmar should be aligned with International (updated ) Laws, orders, practices, and regulations. Reviews and changes we need !
Sep 17, 2018 02:52 AM